Hakone, njem site na Tokyo | Akụkọ Njem
Otu n'ime akara nke Japan Ọ bụ Ugwu Fuji mana belụsọ ma ịnọ n'ụsọ toro ogologo na mbara igwe doro anya na ọ dịchaghị mma na Tokyo. Iji nwee ekele maka ya, tinyere ugwu ndị ọzọ, oke ọhịa na ọdọ mmiri ndị mara mma, ị ga-ahapụrịrị obodo ahụ.
Hakone bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na-atụ aro mgbe ọ na-enwe enwe ọdọ Japan. Ọ dị nso na Tokyo ma dịka njem si arụ ọrụ nke ọma ebe a, ọ dị mfe na ngwa ngwa. Na oge! Ka anyị lee ihe anyị nwere ike ime ma hụ na Hakone.
1 Otu esi aga Hakone
3 Ihe ịga leta Hakone
Otu esi aga Hakone
Ọ bụrụ na ị bụ onye njem nleta na ị zụtara Ragbọ okporo ígwè Japan na mba gị ị nwere ike iji akara JR, ya bụ, ahịrị ọha. Mana n'otu oge, ị ga-aga n'ahịrị nzuzo ma kwụọ ihe dị iche. Nke a na-adịkarị na Japan: ọ bụ ezie na JR dị ogologo, mgbe ụfọdụ ị ga-aga na nzuzo. Ọ dabara, ọ bụghị mgbe niile.
Na JR ị ga-esi Odawara na site na ebe i nwere ike iji ma nzuzo ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala. Ga-esite na Shinkansen si Tokyo ma ọ bụ Shinagawa ọdụ na ọkara ọkara elekere. Ọ ga-abụ ụgbọ oloko Kodama yana ụfọdụ Hikari, jụọ ọfịs mgbe ị na-abịakwute akwụkwọ tiketi ahụ (ọ bụghị Hikari niile na-akwụsị na Odawara). Nhọrọ ọzọ bụ iji ụgbọ oloko dị na Tokyo, nke JR Tokaido ma ọ bụ nke JR Shonan Shinjuku. Ihe nile ka JRP kpuchitere.
Obodo a sara mbara ma nwee ọtụtụ obodo ugwu, ụfọdụ dị n'ụsọ ọdọ mmiri ma ọ bụ na ndagwurugwu. Mpaghara dum ọ na-ejikọta ya site na netwọk dị mma nke ụgbọ oloko, bọs, eriri USB, funiculars na ụgbọ mmiri. Ọ na-enyekwa dị iche iche njem nleta na-agafe na dị iche iche ahịa. Bụ:
Fuji Hakone Pass: na-ekpuchi njem na mpaghara na gburugburu Fuji Five Lakes. Ọ bụ ụbọchị atọ ma na nhọrọ gụnyere njem site na Tokyo. Ọ na-efu 5650 yen, ihe dị ka dollar 50.
Hakone Free nga: Twobọchị abụọ ma ọ bụ atọ gụnyere iji ụgbọ oloko Odakyu niile na-akparaghị ókè, ụgbọ ala, funiculars, eriri USB na ụgbọ mmiri dị na mpaghara ahụ. Ọzọkwa, na nhọrọ, njem njem njem na Tokyo. Ọ na-efu 4000 yen, ihe dị ka euro 40.
Hakone Kamakura Pass: Ọ bụ njem kachasị ọnụ ma na-enye ụbọchị atọ nke iji ụgbọ oloko na-akparaghị ókè na netwọk Odakyu, njem na gburugburu na Hakone, na ịnweta Kamakura. Ọ na-efu 6500 yen.
Ike erughị otu narị kilomita site na Tokyo na ebe oma eji eme onu mmiri mmiri, okwu lagos na olile anya na fujisan. Ebe ntụrụndụ Onsen na-ewu ewu ma ụzọ dị mma isi nwee obi ụtọ bụ ịrahụ ụra na ryokan, ebe obibi ọdịnala ndị Japan. Enwere ọnụahịa niile ma ana m emesi gị obi ike na ahụmịhe ahụ bara uru.
Mgbe ahụ enwere obodo kwesịrị ekwesị dị ka Yumoto, nke dịdebere Odawara, otu n'ime ndị ama ama. Enwere ryokans zoro n'ugwu, dịka ọmụmaatụ, na ndị ọzọ n'ụsọ Ọdọ Mmiri Ashi. Ọ bụrụ na ịnọghị na ryokan ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ịsa mmiri na-ekpo ọkụ na nke ọha na eze, meghere ndị njem, maka 500 na 2000 yen. Dee aha ryokan ndị a: Tenzan, Hakone Kamon, Yunosato Okada, Hakone Yuryo ma ọ bụ Kappa Tengoku.
Ihe ịga leta Hakone
Japan bụ mba mgbawa ugwu nke ọdịdị ala ya gosipụtara site na akụkọ ihe mere eme ya. Hakone nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ị nwere ike ịhọrọ ime ma hụ ihe niile ma ọ bụ belata onwe gị na obere okirikiri. Ọ dabere n’ihe ị chọrọ ime na oge i nwere.
Maka obere elekere Si n'ụgbọ okporo ígwè ahụ pụọ na Odawara ma ọ bụ Hakone-Yumoto ma gaa ụgbọ oloko Tozan na mgbe nkeji 50 nke njem gwụchara na Gora. Ebe ị na-funicular ikpeazụ ọdụ, ịgbanwe ka cableway na-ejedebe na n'ikperé Ọdọ Mmiri Ashinoko. Nwere ike ịgafe ọdọ mmiri site na ụgbọ mmiri ma kwụsị na Hakone-Machi ma ọ bụ Moto-Hakone site na ị nwere ike iburu bọs wee laghachi ebe mbido gị. Sekit a ọ naghị adị ihe karịrị awa atọ.
Na ogologo na zuru ezu circuit? Get si n'ụgbọ okporo ígwè ahụ pụọ na Odawara ma ọ bụ Hakone-Yumoto. Ọ bụrụ na ị rituo na ọdụ izizi ị ga - ahụ Odalọ Odawara nke dị naanị nkeji 10 ma rute ugwu. Ọ bụrụ na ị naghị ewere a ụgbọ okporo ígwè, ndị Tozan, ruo ọdụ Hakone-Yumoto, obere obodo mara mma. Enwere ụlọ ọrụ ndị njem nleta nwere ndị ọrụ na-asụ Bekee ga-enye gị map na broshuọ nke ihe ị nwere ike ime ma lee ebe a.
N'ụzọ doro anya, enwere ụlọ ịsa ahụ ọkụ ma ị nwere ike ịnọ otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ịlaghachi n'ụgbọ okporo ígwè n'ihi na ụzọ nke fọdụrụ bụ nke mara mma, gbagoo ugwu. Get banye na Ọdụ Miyanoshita, na ọtụtụ onsen. Nke a bụ ụlọ nkwari akụ ochie, site na narị afọ nke XNUMX, ebe ị nwere ike ị drinkụ ma ọ bụ rie ihe. Abụọ ọdụ mgbe e mesịrị, na Chokokuno-Mori, ị nwere ebe mara mma kachasị mma nke Hakone na Hakone Open Air Museum nke raara nye ihe ọkpụkpụ nke oge a.
Ọ bụrụ n’ị gaa ije nkeji iri ị ga-erute Gora, mmiri iyi mmiri Tozan. Ebe ị ga-esi na funicular na ịrị ugwu. Nkwụsị ọ bụla nwere nke ya mana njem na-agwụ Souzan ebee ka iwere Hakone cableway nke ahụ na-eburu gị gaa ebe dị elu na njem nke kilomita ise. Way nwere ọkara Owakudani, ebe gbara okwute gbawara na puku afọ atọ gara aga ma taa na-echekwa fumaroles sulphuric, ọdọ mmiri na mmiri ọkụ. Ọzọkwa, na ezigbo ihu igwe ị nwere ike ịhụ Ugwu Fuji.
Ọ bụ ebe a ebe ị nwere ike ịzụta nsen esi nri ozugbo na mmiri mgbawa na na ha dị oji. Nwetụla mgbe ị hụrụ ya na TV? E nwere ụlọ nri na ụlọ ahịa. Y’oburu n’inwe obi uto ma weta akpụkpọ ụkwụ dị mma mgbe ahụ ị nwere ike ịga n’ihu wee rute elu Ugwu Kamiyama na Ugwu Komagatake. Lee ị ga-ewere ọchị ọzọ wee gbadaa n'Ọdọ Mmiri Ashinoko. Kwe ka ije ije ikuku na elekere abua na ndapu oge.
Ọ bụrụ n’ị chọghị ịga ije nke ukwuu, ị nwere ụzọ etiti: ị ga-aga ọkara elekere rue Ugwu Kamiyama wee gbadaa n’ikpere mmiri Ọdọ Mmiri Ashinoko. Ọ bụghị n'ebe dị anya bụ Hakone funicular na-ejikọ na Owakudani. Kwee njem nlegharị anya ise. Owakudani bụ otu n'ime ọdụ Hakone funicular na-ejikọ Souzan na Togendai.
I nwekwara ike ugbo mmiri na Lake Ashinoko, ọdọ ọdọ Caldera nke bụ akụkụ nke kpochapụwo akwụkwọ ozi Fujisan. E nwere obodo ndị dị n’akụkụ ya, ọ dịghị ihe mepere emepe, na ebe ntụrụndụ abụọ. E nwere ụlọ ọrụ abụọ nwere njem ụgbọ mmiri na njem ahụ anaghị ewe ihe karịrị ọkara elekere ma na-efu ihe dị ka 1000 yen. Ọbụna otu n'ime ụgbọ mmiri ahụ bụ ụgbọ mmiri paireti na ụgbọ mmiri ọzọ nke Mississippi. Eziokwu bụ na ka oge na-aga, a na-atụ aro ogologo oge ogologo karịa n'ihi na ị ga-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile Hakone nwere maka gị.
Ọ bụ ya mere, Ndụmọdụ m bụ na ị ga-ewere ya dị ka njem njem ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. Stay nọrọ na mpaghara ahụ, ị ​​na-eje ije, na-ezu ike, ị na-apụ n'abalị wee laghachi Tokyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Hakone, njem site na Tokyo